पोर्चुगलमा बसेर पोर्न स्टार बनाईदिन्छु भन्दै एक परिवारको उठिवास ! (भिडियोसहित) – Anurag Post
Home / अनुराग पोष्ट / पोर्चुगलमा बसेर पोर्न स्टार बनाईदिन्छु भन्दै एक परिवारको उठिवास ! (भिडियोसहित)
पोर्चुगलमा बसेर पोर्न स्टार बनाईदिन्छु भन्दै एक परिवारको उठिवास ! (भिडियोसहित)
Anurag Post April 24, 2018	अनुराग पोष्ट, अन्तर्वार्ता, प्रवासी, भिडियो, राजनीति Leaveacomment 417 Views
२२ वर्षिया युवतीलाई जिउँदो लाश बनाउँनेको कथाः ‘पोर्चुगलबाटै बिनिताको ७ पुस्तालाई सकिदिने धम्की’
काठमाडौँ । एउटा व्यक्ति कति सम्म निर्दयी र पापी बन्न सक्छ ? कपिलबस्तुकी बिनिताको परिवारले त्यो भोग्दै र देख्दै आएको छ । कपिलबस्तुकै वाणगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ११ बस्ने धर्मबहादुर भुषालका छोरा अनुप कुमार भुषालले बिनिताको परिवारको उठिवास लगाएको छ ।
हाल पोर्चुगलको बेजा जिल्ला बस्ने कुमार भुषालले बिनितासंग फेसबुमा मायाको नाटक गरे । त्यही बेला बिनिताको केही फोटोहरु राखेर उन्ले बिनितालाई ब्रकेलमेल गर्न शुरु गरे । नेपाल आएका बेला यसरीनै ब्लेकमेल गरेर औषधि खुवाए उनले बिनितासंग शारीरिक सम्बन्ध बनाए । त्यपछि त झन् उन्ले त्यसको भिडियोनै बनाएर ब्लाकमेल गर्न शुरु गरे ।
अछाममा रक्सी पिएका वडा अध्यक्षद्वारा स्थानीय कुटिएपछि….
अछाम । अछामको ढकारी गाँउपालिका ४ का वडा अध्यक्ष भतm बुढाले स्थानीय वीर बहादुर थापालाई निर्घात कुटपिट गरेका छन् ।
स्थानीय बिद्यालय निमार्णमा मजदुरी गरेर फर्किदै गर्दा वडा अध्यक्ष बुढासहित उनका सहयोगी पदम बुढाले मदिरा सेवन गरेर आफुमाथि आक्रमण गरेको उनको पीडित बताउछन् ।
अहिले जिल्ला अस्पतालमा उपचार गराईरहेका वीर बहादुरको आँखा, नाक, मुख र बिभिन्न शरीरका विभिन्न ठाउँमा चोट लागेको छ ।
घट्नाबारे बुझ्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामको टोलि बलाता पुगे पनि वडा अध्यक्ष नभेटिएको भन्दै फर्किएको जनाएको छ ।
पीडितका दाजु कृष्ण थापाले घटनाको विस्तृत छानविन गरी दोषीलाई कानुनी कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।
‘बिश्रामपुर गाँउपालिका’को कर्मचारीले कमिशन नलिई काम गर्नै मान्दैनन्
बारा । बाराको बिश्रामपुर गाँउपालिका कर्मचारीले कमिशन बिना कामै नगर्ने भएपछि काम गर्न समस्या भएको गाँउपालिका अध्यक्ष अमिरलाल पालले गुनासो गरेका छन् ।
गाँउको स्वास्थ्य चौकीमा अत्यवाश्यक औषधि खरीदका लागि गाँउपालिका अध्यक्ष सहितले ६ महिना अघि नै निर्णय गरेको भएपनि कर्मचारीले कमीशन मागेकै कारण अहिलेसम्म औषधि खरीद गर्न नसकिएको अध्यक्षको आरोप छ ।
यति मात्रै होइन कार्यालयमा लेखापाल महिनामा ४/५ दिन मात्रै आउने गरेकोले विकासका कामको भुक्तानी गर्न नसकीएको दुखेसो पोखेका छन् । सिंगो गाँउपालिका भर १ जना मात्रै सचिव छन्, उनले समेत कमिशन बिना काम नगर्ने भएपछि गाँउगाँउमा बाटो ढलान तथा नाला बनाउने काम समेत प्रभावित पर्ने गरेको छन् ।
बल्लबल्ल गाँउपालिकामा हाजिर हुने कर्मचारीलाई कामको बिषयमा गुनासो गरे कार्यालय नै नजाने गरेपछि थप समस्या सिर्जना हुने गरेको छ ।
सरकारले गाँउपालिका अध्यक्षहरुलाइ समीति स्रोतसाधन र कागजी अधिकारकै भरमा सिंहदरबारको आशा देखाएकाले काममा समस्याका भएको उनको भनाइ ।
बाराको बिश्रामपुर गाँउपालिकाका अध्यक्ष अमिरलाल पालको यो गुनासो एक प्रतिनीधि घटना मात्रै हो । स्थानीय निकायका जनप्रतिनीधि र कर्मचारीको मेल नमील्दा सर्वसाधारण रनभुल्ल छन् । source:news24nepal
Previous मख्खै परे अशोक दर्जी मेलिना राइ संग गीत गाउन पाउदा
Next फर्किए अशोक दर्जी आफ्नै गाउँ । पढेर ठूलो मान्छे बन्ने सपना